Oleksandr Zinchenko '' Jawiga Kooxda Waxa Uu Uu I Xasuusinayaa Ku Guuleysiga Hoyraalka Ugu Danbeeyay Ee Kooxda''
Home Horyaalka Ingiriiska Oleksandr Zinchenko ” Jawiga kooxda waxa uu uu i xasuusinayaa ku Guuleysiga...
Oleksandr Zinchenko ” Jawiga kooxda waxa uu uu i xasuusinayaa ku Guuleysiga Hoyraalka ugu danbeeyay ee Kooxda”
Oleksandr Zinchenko ayaa dareemi kara guuxa qolka labiska ee kooxda Man City kaas oo dib u xasuusinaya isaga xiliyadiisii ​​hore ee ay ku guulaysteen hanashada horyaalka.
Hogaamiyaasha Premier League ayaa sii waday dardarkooda markii ay si fudud uga soo gudbeen Tottenham oo 3-0 ku garaacday Etihad Stadium Sabtidii iyadoo Ilkay Gundogan uu dhaliyay labo gool.
City ayaa haatan badisay 11 kulan oo isku xigta oo Premier League ah – iyo koox sarre oo rikoor ah oo rikoor ah 16 kulan tartamada oo dhan – waxaana ay u muuqdaan kuwa ugu cadcad hanashada horyaalka.
“Waa inaad ku aragtaa jawigaya qolka labiska ciyaarta kahor iyo kadib – waa wax kale,” ayuu yiri daafaca bidix ee reer Ukraine. Waxaan dhihi lahaa jawigaan wuxuu i xasuusinayaa City markii aan noqonay horyaal labo jeer oo isku xigta.
Waxaan kaliya si buuxda diirada u saareynaa kulamada soo socda waxaan isku dayeynaa inaan isku diyaarino sida ugu fiican ee aan kari karno maxaa yeelay wali kulamo badan ayaa naga horeeya iyo xilli ciyaareed badan oo soosocda. ”
City ayaa haatan sameesay 23 kulan oo aan laga badinin tartamada oo dhan tan iyo guuldaradoodii ugu dambeysay, ee ka soo gaartay Spurs, bishii November ee la soo dhaafay.
Previous articleJamie Carragher: oo tilmaamay Cida ay saarneyd masuuliyada Daafaca Liverpool ee Kulanka Liecester
Next articleGundogan oo doortay Xidiga uu jecelyahay ee soo maray Noloshiisa